IXiaomi Black Shark 2 idlula kuvavanyo olwaziwa kakhulu lonyamezelo
IXiaomi Black Shark 2 yeyona fowuni intsha yokudlala evela kuhlobo lwaseTshayina, thaca kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ukongeza, kwabo banomdla, umnxeba inokuthengwa ngoku eSpain ngokusemthethweni. Isixhobo esiboniswe njengenye yezona ndlela zibalaseleyo kweli candelo lentengiso. Nangona ukuxhathisa kwayo yinto engakhange ivavanywe, kude kube ngoku. Kuba ifowuni ipasa olona vavanyo luthandwayo lunyamezelo.
Eneneni, Yonke into ifunda iXiaomi Black Shark 2 kuvavanyo lwonyamezelo olungqongqo kwintengiso. Ukuze sikwazi ukubona ukuba ifowuni yophawu lwaseTshayina iyakwazi ukumelana nazo zonke ezi mvavanyo. Umnxeba uphantsi kovavanyo oluqhelekileyo lolu vavanyo.
Kwindawo yokuqala, izama ukukrola isikrini somnxeba, ukongeza kumacala ayo kunye neenzwa. Kuqala, kunokuba yinto emangalisayo ukuba isikrini sale Xiaomi Black Shark 2 sikrwitshiwe kangakanani.Nangona iluhlu lweplastiki olukhuselayo olukwiskrini. Kuba iglasi efanayo iyayixhasa le nxalenye kakuhle, njengesiqhelo kuluhlu oluphezulu.
Amacala omnxeba, ukongeza kwiikhamera ziyayixhasa le nto. Yintoni egqithisile, xa isivamvo somnwe weminwe sikrwele, edityaniswe kwiscreen, siyabona ukuba isasebenza. Emva koko isikrini siyatsha. Kuthatha ngaphezulu kwemizuzwana engama-20 ukubonisa uphawu, kodwa olu phawu luhlala lukho. Kuba sisikrini se-AMOLED.
Umzuzu owawulindelwe ngumntu wonke ufikile. Ukusukela ngoku Le Xiaomi Black Shark 2 izakuzama ukugoba. Ngale ndlela, sinokubona ukuba ifowuni yokudlala yohlobo lwesiTshayina ichasene kakuhle. Ayigobi nangaliphi na ixesha, kwaye akukho zinto zinokukhululwa. Ke iyayichasa le nto kakuhle.
Ke kunokugqitywa ekubeni IXiaomi Black Shark 2 iphumelele uvavanyo lweJerryRigEverything ngemibala endizayo. Isiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina asikhange sibandezeleke kakhulu kuyo. Ke abo banomdla kwifowuni bayazi ukuba bajongene nemodeli eya kuthi inike ukuxhathisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Black Shark 2 idlula kuvavanyo olwaziwa kakhulu lonyamezelo
I-Podcast kaGoogle iya kongeza ixesha lokudlala
Ukuhlaziywa kweGalaxy J6 + kunye neJ4 + kwiPie yePie